Dalal Carbeed oo wacad ku maray in ay tallaabooyin hor leh ka qaadi doonaan Qadar - somalilandlivemedia
Dalal Carbeed oo wacad ku maray in ay tallaabooyin hor leh ka qaadi doonaan Qadar
13:23 7. July 2017
Afarta dal ee Carbeed ee hogaaaminaya go’doominta ka dhanka ah Qadar ayaa diidmada Dooxa ee dalabkooda ku macneeyay halis ammaanka gobolka ka dhan ah.
War ay si wadajir ah u soo saareen Scuudi Carabiya, Baxrayn, Masar iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayay sidoo kale kaga digeen tallaabooyin dheeri ah.
Afartaas dal ayaa xiriirkii u jaray Qadar bishii hore, iyaga oo ku eedeeyay in ay taageerto kooxaha jihaaddoonka ah.
Qadar oo toddobaadkan horraantiisii diiday dalabka ay soo gudbiyeen dalalkan uu Sacuudigu hor kacayo ayaa iska fogaysay eedaymaha loo soo jeediyay.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa la filayaa in uu Isniinta gaaro dalka Kuwayd oo dhexdhexaadinaya dhibaatada Khaliijka.
War qoraal ah oo ay Khamiistii si wadajir ah u soo saareen Scuudi Carabiya, Baxrayn, Masar iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayay ku sheegeen in diidmada Qadar ee 13-kooda dalab in ay ka dhigantahay sida ay u doonayso in ay sii wado siyaasaddeeda ay uga golleedahay in ay ku burburiso ammaanka gobolka
Waxyaabaha ay dalalkaasi Qadar ka dalbadeen waxaa ka mid ah in ay albaabada u laabto warbaahinta Al-Jazeera iyo in ay hoos u dhigto calaaqaadka ay Iiraan la leedahay iyo sidoo kale in ay ku soo wareejiso dadka ay argagixisonimo u raadinayaan
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo Xadhiga ka jaray saldhigga Military Ee Dalka Turkigu ka dhisay Muqdisho
Halkan Ka Daawo Guddoomiye Faysal Cali Waraabe Oo Si Kulul U Weeraray Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde
Sheekh Adam-siira Oo Xukuumadda Si Adag Ugu Dhaliilay Dagaalada Soo Noqnoqday Ee Gobolada Bariga Video
Xildhibaan Reer Saaxil Ah Oo Ka Soo Horjeestay Qaabka Loo Wareejiyey Warshadii Sibidhka Berbera Video
Newer PostDonald Trump ‘has trouble finding hotel room at G20 summit’ There is no Trump hotel in the city
Older Post Wakiilka Somalilland Germany oo kaqayb galay Shirka Maalgashiga Afrika